ပရိသတ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရွှေမှုံရတီ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် ရွှေမှုံရတီ | Popular
ပရိသတ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရွှေမှုံရတီ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် ရွှေမှုံရတီ
သရုပ်ဆောင် ရွှေမှုံရတီကတော့ အနုအရွ ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ် အားပေးမှု အပြည့် အဝရရှိထားသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရွှေမှုံရတီကတော့ သူမရဲ့နေထိုင်မှု ပုံစံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ် တစ်ချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့လည်ကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။ တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုက သူမရဲ့အနုပညာကို ထိခိုက်စေလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ရာ . . .
”ပရိသတ် ဝေဖန်မူတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပရိသတ် ဝေဖန် မှုတွေက ညီမရဲ့ အနု ပညာကို မထိခိုက်ပါဘူး။ ညီမကို ဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရာအားလုံးကို ညီမရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အားသာမှုတွေကို ထောက်ပြတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကို ညီမ မသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်ဟာလိုတယ်၊ဘယ်ဟာပိုတယ်ဆိုတာကို မသိဘဲနဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ် နေမိမှာပါ။ ညီမကို ဝေဖန်ပေးမှလည်း ညီမဘယ်ဟာကို လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိမှာလေ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ညီမကို ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုချိန်ကစပြီး ညီမပရိသတ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရွှေမှုံရတီဖြစ် အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ် ဝေဖန်မှုများထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးက တည်း က စပြီးရေကူးတာပါလို့ပြောလာတဲ့ရွှေမူံရတီက . . .
” ညီမကငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရေကူးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် လည်း ဒီလောက် အရပ်ရှည်တာပေါ့နော်။ အားကစား တစ်ခု အနေနဲ့ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တစ် စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဖြစ်တယ်။ နောက် ပိုင်းတော့ မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံလေးတွတင်ဖြစ်တော့ နည်း နည်းလူသိပြီး ခေတ်စားသွား တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလောက်ပါ ပဲ။ ညီမက အခုချိန်မှာ သာမန်လူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရေကူးကန် မှာ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ တင်မယ်ဆိုရင် လည်းဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ် ပါဘူး။ သာမန် မိန်ကလေးတွေ လည်း ရေကူးကန် မှာ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ အလှဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြတာပဲ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေတောင် ရိုက်ကြပါတယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သဘင်ပညာရှင်များညီညီညွတ်ညွတ်နှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို စိုက်လိုက်မတ်တတ်ကြိုးစားပြီး ပြည်သူများအထိသိအောင် ဖန်တီးပေးကြပါဟု ဘဘဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် ပြောကြား